Print Email 430
သုတေသနလုပ်သူတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်၁၈%ဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာစမှာ အမွှာနဲ့စခဲ့ပြီး၊ နောက်မှကလေး တယောက်တည်း ဖြစ်သွားကြတယ်လို့သံသယရှိကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စမှာ(အာလ်ထွာဆောင်း)ရိုက်တော့သန္ဓေသား နှစ်ခုတွေ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တခုတည်းဖြစ်တာကို Vanishing twin syndrome လို့ခေါ်တယ်။ Conjoined twins (Siamese) ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ ဆိုတာက Monozygotic twins (ဇိုင်ဂုတ်) တခုတည်းကဖြစ်တဲ့ အမွှာအမျိုးဘဲ။ ကိုယ်နှစ်ခုက ကွဲမထွက်လို့ ဆက်နေတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၅ သောင်းမှာသာ တယောက် ဖြစ်တတ်တယ်။ မိသားစုထဲမှာ အမွှာမွေးဘူးသူရှိရင် အမွှာကိုယ်ဝန် ပိုဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်။ Fraternal twins ထပ်တူ မဟုတ်တဲ့အမွှာ နဲ့ Identical twins ထပ်တူဖြစ်တဲ့အမွှာ ဆိုပြီး (၂) မျိုးရှိတယ်။ မတူတဲ့ အမျိုးအစားက ပိုများတယ်။ အမွှာကိုယ်ဝန်ဖြစ်နေတာကို ဆရာဝန်ကနေ ဗိုက်ကိုလက်နဲ့၊ နားကြပ်နဲ့ စမ်းတာနဲ့လဲ သိနိုင်တယ်။
သေချာအောင် Ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ရမယ်။ • အမွှာဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရိုးရိုးထက် ကိုယ်အလေးချိန် ပိုများနေမယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိကာစ တပတ်မှာ ၁ ပေါင်တိုးတယ်။ နေ့လစေ့မှာ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆိုရင် ၂ဝ-၃ဝ ပေါင်တိုးလာမယ်။ အမွှာကိုယ်ဝန်က ၃ဝ-၄ဝ ပေါင် တိုးနေမယ်။ • အလေးချိန်များလို့ အနေရခက်မယ်။ ပိုပြီး အနားယူရမယ်။ ခြေတွေကို အခုအခံပေါ်မှာတင်ထားပြီး နားသင့်တယ်။ အလုပ်လုပ်သူဆိုရင် မီးဖွွါးခွင့်ကို မမွေးခင် ၆ ပတ်ထက်နောက်ကျပြီးယူတာ မလုပ်သင့်ဘူး။
• ကလေးတယောက်တည်းကိုယ်ဝန်နဲ့ စာရင် အားဆေးတွေ ပိုလိုမယ်။ ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု သောက်ရမယ်။
• သွေးအားနည်းတာပိုဖြစ်နိုင်လို ့သံဓါတ်အားဆေး သောက်ကိုသောက်သင့် တယ်။ ဖေါလစ်အက်စစ်လဲ လိုတယ်။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်တာကို ပိုဂရုစိုက်ရမယ်။ ဆရာဝန်ကနေ (အာလ်ထွာဆောင်း) နဲ့ ရေမြွာရည်လည်း စစ်မယ်။ ကလေးအခြေအနေကိုလဲ စစ်မယ်။ အချင်းကိုလဲ စစ်မယ်။
•၁၈-၂၄ပတ်ကနေစပြီးသားအိမ်ဝကို တိုင်းတာတာလဲလုပ်မယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း စမ်းပြီး သားအိမ်ဝကိုလဲ စစ်မယ်။ Incompetent cervix သားအိမ်ဝ မလုံတာ မဟုတ်ဖို့ သေချာချင်လို့ ဖြစ်တယ်။ ၅% မှာအဲလို ဖြစ်တတ်တယ်။ ဖြစ်ရင် သားအိမ်ဝကို မမွေးမချင်း ချုပ်ထားပေးရတယ်။
• Ultrasound ပိုရိုက်ရမယ်။ တချို့ဆရာဝန်တွေက တလတခါရိုက်တတ်တယ်။ အချင်းကိုစစ်ချင်တယ်။ ၁၆-၁၈-၂ဝ-၂၂-၂၄ ပတ်တွေမှာ Twin-twin-transfusion syndrome မဟုတ်တာ သေခြာချင်လို့ရိုက်တယ်။ ၂၄ ပတ် နောက်ပိုင်းတော့ တလတခါသာ ရိုက်ပါမယ်။
• Preterm labor စောမွေးတာ ၅၅% ရှိတယ်။
• Premature rupture of membranes ရေမြွာစောပေါက်တာ၊ Uneven growth ကလေးနှစ်ယောက် ဖွံ့ထွားမှု မတူတာ၊ High blood pressure သွေးတိုးရှိတာ၊ Preeclampsia ကိုယ်ဝန် သွေးဆိပ်တက်တာ နဲ့ Diabetes ဆီးချိုရှိလာတာတွေ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။
• ဂျာမန် သုတေသနတခုမှာ အမွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေါင်း ၄၁၁ဝ ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ကလေးတယောက်နဲ့ တယောက် မွေးလာတဲ့ အချိန်တွေကွာခြားတာကို လေ့လာတယ်။
- ပျမ်းမျှ ၁၃့၅ မိနစ် ကွာခြားတာတွေ့ရတယ်။ - ၁၅ မိနစ် = ၇၅့၈%၊ - ၁၆-၃ဝ မိနစ် = ၁၆့၄%၊ - ၃၁-၄၅ မိနစ် = ၄့၃%၊ - ၄၆-၆ဝ မိနစ် = ၁့ရ% နဲ့ - တနာရီထက်မကကွာတာ (၇၂ ယောက်) = ၁့၆% ရှိတယ်။ • မွေးဖွါးချိန် ပိုကြာတတ်တယ်။ • C-section ဗိုက်ခွဲမွေးနိုင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်။ အမွှာကိုယ်ဝန်တိုင်းကို ခွဲမွေးရမယ်လို့ မဆိုလိုဘူး။ • မွေးပြီးရင် ကလေးတွေကို မိခင်နို့တိုက်ဘို့ ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ ဒီအတွက် စားသောက်တဲ့အခါ တနေ့မှာ ကယ်လိုရီ ၅ဝဝ ပိုလိုမယ်။
2. မီးဖွားပြီး စိတ်ကျဝေဒနာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ?
ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း တို့ကြောင့် စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ကြေကွဲလွယ်ခြင်း၊ အပြစ်ရှိသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်း စသည့်ခံစားချက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီး စိတ်ကျဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါ တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အအိပ်လွန်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ အစားလွန်ခြင်း၊ စိတ်ကြြွခင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်ခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချို့ အမျိုးသမီးတွေမှာ မီးဖွားပြီးစအချိန် သိုင်းရွိုက်အကျိတ်လုပ်ငန်းများ ယာယီရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အတွက် စိတ်ကျတတ်သလို အမျိုးသမီးဟော်မုန်းများ ရုတ်တရက်ကျဆင်းတဲ့အတွက် စိတ်ကျတတ်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးစိတ်ကျဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါ သိမှု အပြုအမူကုထုံးလို့ခေါ်တဲ့ Cognitive Behaviour Therapy (CBT) အသုံးပြုပြီး စကားပြောကုသပေးရသလို ဆေးဝါးဖြင့် ကုသဖို့လိုတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ကျရောဂါ ကုသဆေးတွေ ပေးရပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါကုသဆေး အချို့ဟာ မိခင်နို့မှတစ်ဆင့် ရင်သွေးငယ်ထံ ရောက်တတ်တဲ့ အတွက် စိတ်ကျရောဂါဆေးများကို ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်၍ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီး မကြာခင် စိတ်ဓါတ်ကျလာတဲ့အခါ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများထံမှ အကူအညီရယူပါ။ အနားယူပါ။ မိတ်ဆွေများထဲမှ မီးဖွားပြီးစ မိခင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ကလေး ထိန်းငှားပြီး မိမိကိုယ်ကိုပိုဂရုစိုက်ပါ။
Ref: ဇော်ကို Health Updates Journal as in : Source:WebMD October 22, 2013